Shanyira Hultsfred | MuHultsfred mune nzvimbo yeupenyu!
🎟️ Kendari yeChiitiko
📕 Nyoresa zviitiko
🍽️ Idya nekunwa
🚜 Zvitoro zvepurazi
🪑 Zvinhu zvekare uye misika yenhata
🏊‍♂️ Nzvimbo dzekugezera
🚴‍♀️ Kuchovha bhasikoro
Åda Shiri watching
🎣 Kubata hove
🪁 Zvisikwa & hupenyu hwekunze
⛸️ Zviitwa zvechando
🛷 Toboggan anomhanya
🖼️ Unyanzvi & Crafts
🏡 Tsika-nhoroondo nharaunda
🏘️ Mamuseum & Zviratidziro
🏞️ Mapaki & anotarisisa
Pane nzvimbo pano yehupenyu
Wana matipi ezviitiko uye zviitiko
Tsvaga Hultsfred uye Vimmerby 22 Chivabvu
Madhadha - magamba edu egoridhe!
Art kutenderera 28-30 Gumiguru
Mhizha chaidzo paStinsen - hunyanzvi uye mhizha 🧵 🪡
Usapotsa chero chinhu chirikuitika mudunhu reHultsfred.
Chiitiko Kutsvaga uye Maonero Ekufamba
Pinda mazwi akakosha. Tsvaga Keyword Zviitiko.
Sarudza nzvimbo. Tsvaga Zviitiko nenzvimbo.
Chiitiko Views Navigation
Chivabvu 17 na10 masikati. - 12: 00	 inodzokororwa
Nordic kufamba kuLönnebergaboa
Kufamba kweNordic Lönneberga Boa / Silverdalen nhandare yemitambo Chipiri naChipiri na10 am Info: Birgitta 070-646 78 46
Chivabvu 17 na11 masikati. - 13: 00	 inodzokororwa
Nordic inofamba muHultsfred
Ma kiosks ekuchamhembe	Storgatan 131, Hultsfred
Tinoungana pane yekare Norra kiosk pamusoro pa11.00 Ruzivo: Carin 070-304 57 22
Chivabvu 17 na14 masikati. - 16: 00	 inodzokororwa
Hultsfred Raibhurari	Västra Långgatan 46, Hultsfred
Muvhuro 10-12 Chipiri Chipiri 14-16 Panguva yekudonha-mugari, vagari vekanzuru vanogona kuwana rutsigiro kuitira kuti vagone kutora mukana mukugona kwedigitalisation. Vashandi panzvimbo vanogona, semuenzaniso, kubatsira nekuchaja
Chivabvu 17 na18 masikati. - 19: 00
LGBTQI ipapo uye zvino
LGBTQI ipapo uye zvino Hurukuro naEdward Summanen Edward Summanen, munyori webhuku "Queera nguva - LGBTQI ipapo uye zvino" inopa muhurukuro iyi sumo kune yemazuva ano.
Chivabvu 17 na19 masikati. - 20: 30
KANA Hebe - Överums IK
Unganidzo: 18:00 pm
Inonakidza mamuseum, zviitiko zvine hushamwari zvemhuri, zvinonakidza kuona uye hunhu hunoshamisa. Tsvaga iyo yose yeHultfred!
KuBlaxhult kune imba yekare kubva kuIron Age uye padanho riri pazasi pegomo pane mana ekuviga mounds, iyo yekare kubva kuNeolithic. Mune rimwe remakuva
Oppbjärken idziva rakadzika remasango rine hutano-husina mvura uye yakajeka Dziva iri makiromita mashoma kumabvazuva kweHultsfred, kumaodzanyemba kwemusha weFallhult. Around
Málilla elk paki
Mhembwe, tsuro, mbudzi nehuku zvinogara kuMålilla Älgpark.Kuti zvive nyore kuti usangane nemhembwe padyo, pane kamwe fenzi
Hagadal kushambira uye imba yemitambo
Hagadal yekushambira uye yemitambo horo inopa kushambira, kurovedza muviri, kukwiza muviri kana kutandara neshamwari uye nekunwa kofi. Iyo nzvimbo iri padhuze nemasikirwo ine akanaka maekisesaizi nzira.
PaPrästkragegärdet muVena, pane chikomo chakakodzera sledding nemitambo yechando.
Bo Lundwall, akaberekerwa muHultsfred muna 1953, ane studio yake mumba memhuri yake, Hultsfreds Gård, anobva muzana ramakore rechi 1600 nerechi 1700. Bo akadzidza
Emilleden inonyanya kutangwa kubva kuLönneberga hembygdsgård kana Mariannelunds uye Hessleby hemgårdsgård, uko kune mikana yakawanda yekupaka. Unosarudza zvakare
Kuona & zviitiko
Kushamisika nenharaunda nharaunda, hunyanzvi & mhizha, mhuka dzesango, hunhu hwakanaka uye zvimwe zvakawanda. Kune zvakawanda zvezviitiko uye zvinokwezva pano, mazhinji acho akavhurwa gore rese!
Dackestupet inzvimbo yekushambadzira ine materu matatu akasiyana, chinosimudza chikuru uye malifts maviri padanho revana. Dackestupet ine yazvino uye inoshanda chando kannon system uye piste muchina. Iyo
MuJärnforsen, kune netiweki yenzira dzinoyevedza dzekufamba musango, zvese zvinotangira kunze kwenzanga. Pakutanga kune nzvimbo yekugocha,
Dalsebo windmill yakadzorerwa zvakanaka uye ikozvino ine mamuseum. Dalsebo musha uri munzvimbo ine minda uye masystem emigwagwa ane zvakafanana
Prolympiahallen inzvimbo yakakurumbira yekusangana kune wese anoda skate. Kune yekudyira inovhurwa pazororo nekupera kwevhiki. Panguva yekukwira kwevanhu
🖼️ Mamuseum & kuratidzwa, 🎺 Mimhanzi
Zvinopfuura hafu yemirioni zvinhu zvine chekuita nemimhanzi yeSweden ine mukurumbira. Pano iwe unowana zvakarekodhwa, maposter, mavhidhiyo akarekodhwa, mabhuku, curiosities - uye yekutanga Costume yaKurt Olsson! Swedish Rock Archive
Zvese zvinotaridza & zviitiko
Ona nzvimbo dzose dzekugezera
Ona nzira dzese dzekufamba musango
Wona ese mapaki & zvisikwa musasa
Ona dzimba dzese
Kudya kwemanheru kunakidzwa, kwemasikati mutaundi kana manheru akanaka neshamwari. Iko kune chimwe chinhu kune ese manakiro uye nguva.
Pakati paMålilla neVirserum uchawana musha mudiki Flaten neBageriet Björkaholm. Pano iwe unobika padiki diki uye uine mhando yepamusoro yezvisanganiswa. Chingwa chinotenderera, mabhegi,
KuLönnebergaboa, chikafu chinofanira kugara chiri chinhu chaunogovana neshamwari, uye kuti kushanya kwako kuve chimwe chinhu chisingawanzoitika, isu mwaka
Chikafu chekuChina-chiVietnamese chine chinyakare Chinese neVietnamese Kune dzakasiyana siyana dzakasiyana ndiro, yekuSweden yekubika kumba, á la mape uye
Panotenderera kuMålilla pane Grillstugan uye pano burger nemaseji anoshandiswa nemash uye zvimwe zvekushandisa, pamwe neice cream. Kana mamiriro ekunze achibvumira, iripo
Pizzeria iri pakati muHultsfred. Mukuwedzera kune pizza, kebabs uye masaradhi ariwo pane menyu. Muzhizha kune zvakare chinzvimbo chekunze. Kune makumi maviri nemana
Pakati peVetlandavägen muMarlilla ndiyo Bandy Grill. Pano unogona kusarudza pakati burgers, sausages, meatballs, kebabs, huku. Munguva yezhizha kune zvakare diki yekunze teru.
"Kudya kwakanaka nehana yakachena, yakananga kubva kupurazi". Pano iwe unogona kuraira organic uye yemuno inogadzirwa nyama. Shanyira kana zororo uye ugare papurazi re organic, sangana
🏨 Hotera, 🎺 Mimhanzi, Maresitorendi
Izvo hazvina basa kana iwe uine zvaunotarisa zvakagadzirirwa parudo vhiki yevhiki, zororo remhuri kana musangano - kune mhando dzekugara dzinokodzera nguva dzese.
Kupaka nzvimbo dzemakaravhani, dzimba dzemotokari uye mukana wekudzika musasa Pano pane mukana kune chimbuzi chakaremara chine mvura inopisa uye yekuchinja imba. Bhengi nzvimbo uye anenge mazana mapfumbamwe emamita
Fiskebodarna - Stora Hammarsjöområdet iri makiromita gumi kumadokero kweHultsfred, ingangoita maminetsi makumi maviri nemashanu kuenda kuVimmerby. Iyo nharaunda inzvimbo yakasikwa uye yekuchengetedza hove iyo inosanganisira ingangoita makumi matatu
Pano iwe unogara neakanaka maonero eLake Hulingen! Iwe uri padyo nemahombekombe, zvivakwa uye cafe. Kufamba kwemakiromita maviri pakufamba kunofamba kunotora
Palace Hotera & Restaurant
🏨 Hotera, Maresitorendi
Iyi hotera inotonhorera, yemhuri-inemamirimita makumi mashanu chete kubva kuHultsfred Chitima chechitima muSmåland. Kubva kuhotera iwe unoona iyo iri pedyo Lake Hulingen. Vose zvavo
Tsvaga Hultsfred uye Vimmerby 22 Chivabvu Madhadha - magamba edu egoridhe! Art kutenderera 28-30 Gumiguru Mhizha chaidzo paStinsen - hunyanzvi uye mhizha 🧵 🪡
Tsvaga Hultsfred uye Vimmerby 22 Chivabvu Madhadha - magamba edu egoridhe! Art kutenderera 28-30 Gumiguru Mhizha chaidzo paStinsen - hunyanzvi uye mhizha 🧵 🪡 Nhoroondo yeVirserum's Furniture Indasitiri Museum